Fivoriana Fanasitranana lavitra – Fitsaboana mahery vaika lavitra – miaraka amin’i Jucelino da Luz faha-26. jona 2022 – JucelinoLuz
❤ Ho anareo namana rehetra malala ❤
Fivoriana fanasitranana lavitra miaraka amin’i Jucelino da Luz
Faly izahay milaza aminao fa efa an-tserasera izao ny kalandrie ho anao ❤
Jucelino da Luz koa dia iray amin’ireo mpanasitrana ara-panahy breziliana malaza indrindra. Miasa amin’ny angovo ara-panahy cosmic izy ho an’ny asa fanasitranana ary manao hetsika mahery vaika (tsy miditra amin’ny vatana). Efa nitsabo olona roa tapitrisa mahery tany Brezila sy maneran-tany izy.
Nanomboka tamin’ny faha-9 taonany dia efa nahazo hery fanasitranana amin’ny alalany izy, izay ampitainy amin’ny tanany, mikasika ilay olona, ​​na avy lavitra, ary mahatalanjona ny vokatra azo. Tsy misy na iza na iza eto amin’ity planeta ity afaka manao tahaka ny tenany na dia “fanomezana” noraisina sy nomen’izao rehetra izao aza. (Fanomezana avy amin’Andriamanitra Tsitoha). Midika izany fa tsy azo raisina, na afindra na ampitaina amin’olona hafa.
Na dia mbola zatovo aza dia nirohotra nitsena azy ny olona ary olona hatramin’ny 600 no notsaboiny tao anatin’ny iray andro.
Ny lazany amin’ny maha-mpanasitrana azy dia iraisam-pirenena ary ny Japoney dia mihevitra azy ho lehibe indrindra amin’ny rehetra.
Tsy mampiova ny angovo ampitainy ny fitsaboana anao!
Ary ny 60% amin’ny olona dia mahazo angovo amin’ny fitsaboana voalohany, ary ny 40% dia ilaina mba hamitana ny faribolana 10 (folo) farafahakeliny mba hahatsapana ny vokatra.
Ny mpanjifanay rehetra, aorian’ny fivoahan’ny sela angovo, dia hahazo amin’ny fifandraisana nomena azy, ny orientation ara-panahy momba ny fitsaboana natao.
Ity ny rohy hahazoana ity vaovao ity:
Ny soratrao dia mivantana amin’ny ekipan’i Jucelino Luz amin’ny alàlan’ity mailaka ity: jucelinoluz44@gmail.com
Alefaso ny sarinao (na amin’iza no hahazoanao angovo matanjaka avy amin’ny Oniversite ambony), anarana feno, ny fangatahanao ny faha-26. jona 2022
Alefaso miaraka ny hetra hisoratra anarana ( inscription ) 70 Euros na apetrao mivantana ( Misy endrika telo azo afindra):
B) famindrana kaonty: Banky Santander
Laharan’ny kaonty masoivoho 0672: 01015313-7
haingana : SABVBRS1XXX
Mankasitraka an’i Jucelino Nobrega da Luz
C) Ny pix: 5519996793343
Boky vaovao navoaka – eBook amin’ny fiteny 46
Azonao atao ny mizara amin’ny namana sy ao amin’ny vondrona sosialy anao koa.
Tsy mandoa afa-tsy 3 Euros ianao ary mandray amin’ny mailakao amin’ny PDF na PUB, ny safidinao – alefaso ny baikonao sy ny kopian’ny tapakila fandoavam-bola + safidy amin’ny fiteny. (ao anatin’ny dimy (5) andro dia halefa amin’ny mailakao (miantoka ny famakian-teny ho an’ireo mandoa vola – tadidio fa ny boky navoaka rehetra, dia voaaro amin’ny zon’ny mpamorona (tsy afaka mamerina na mampiasa ny atiny, tsy misy teo aloha). fanomezan-dàlana mazava, avy amin’ny mpanoratra ny boky elektronika).
Seminera Jucelino Luz vaovao ho an’ny 2022
( Efa ambara ny mpikarakara – ny fifandraisana amin’ny fisoratana anarana – )
Aogositra / 2022 – Alemaina
Septambra /2022 – Soeda / Soisa
Oktobra /2022 – Frantsa / Polonina
Novambra /2022 – Bolgaria
Bokin’i Jucelino Luz & Herbs
Fifandraisana : finday +55-62-982006505
Raha manana toerana fitsaboana ianao, ivon-toeram-panahin’ny fanahy, dia anisan’ny vondrom-piarahamonina ara-pinoana, holistic, filozofika, vondrona fiarovana ara-tontolo iainana (tontolo iainana), ary te hitondra an’i Jucelino Luz amin’ny seminera na fianarana any amin’ny firenenao, mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny. fampahalalana (tsy misy afa-tsy amin’ny 2023): jucelinoluz44@gmail.com